Ko Boo – Gaming Noodle
Lina The Slayer ၏ Background Story (Lore)
Dota Lore, FEATURES / By Ko Boo
[Unicode] Lina The Slayer ၏ Background Story သမပိုင်းဇုန်တစ်ခုမှ အတူတကွ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့ Linaနဲ့ Rylaiတို့ နှစ်ယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ရင်း ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့ ညီအစ်မ နှစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုမှာရိုးသားဖြူစင်ပြီးအပြစ်ကင်းတဲ့ Rylai အပေါ်ကိုပါးနပ်စွာအကွက်ကျကျစီစဉ်ပြီးဗိုလ်ကျတတ်တဲ့ Lina က များသောအားဖြင့် အသာစီးရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအသွင်မတူတဲ့ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တစ်နေရာဆီခွဲထားဖို့ အကြံညဏ်မရခင် အချိန်အတွင်းမှာပဲဒုက္ခပေါင်းစုံခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာသူတို့ ပိုင်တဲ့ တစ်ဒါဇင်ခန့်ရှိသောလယ်ယာ၊ အိမ်ယာ၊ အဆောက်အအုံများအားလုံးဟာလည်းတစ်ဝက်ခန့် မီးလောင်ပြာကျကာ၊ ကျန်ဒါဇင်ဝက်ဟာလည်းရေခဲများခဲကာပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ အစ်မကြီးဖြစ်တဲ့ Linaကတော့ ဝေးလံလှတဲ့ တောင်ပိုင်းရှိ Misrule ကန ္တရ မှာနေတဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သောအဒေါ်ဖြစ်သူထံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံလိုက်ရပြီးထာဝစဉ်မီးတောက်လောင်နေတဲ့ Linaအတွက် ဒီရာသီဥတုဟသက်တောင့်သက်သာရှိလှပါတယ်။ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်တိတ်ဆိပ်လှတဲ့ ဒီဒေသအတွက်ကိုLinaရောက်ရောက်လာခြင်းမှာမျက်နှာပန်းလှစေခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့ ဒေသခံတွေရဲ့ မျက်ခုံးမွေးတွေ …
Lina The Slayer ၏ Background Story (Lore) Read More »
Evil Geniuses ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကိုယ်ပိုင် CS: GO အသင်းထူထောင်မယ့် အမေရိကန်ရေတပ် (U.S. Navy)
[Unicode] အမေရိကန်ရေတပ် (U.S. Navy) ဟာ Esports ကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ Twitch, Electronic Sports League (ESL) နဲ့ DBLTAP တို့နဲ့ ပူးပေါင်းမှုများ ပြုလုပ်ပြီး Esports လောကအတွင်းဝင်ရောက်ဖို့ ခြေလှမ်းသစ်ကို စတင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ရေတပ်ဟာ မြောက်အမေရိက Esports အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Evil Geniuses (EG) ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကိုယ်ပိုင် CS: GO အသင်းကိုလည်း ထူထောင်ဦးမှာဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ရေတပ်ဟာ ယင်းတို့ရဲ့ တပ်သားသစ်စုဆောင်းရေးကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းဖို့အတွက် ရုပ်မြင်သံကြား၊ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် စတဲ့ သမားရိုးကျနည်းလမ်းများအစား Twitch နဲ့ YouTube တို့လို ဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများကို ဦးစားပေးအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းတုန်းက ကြေညာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် …
Evil Geniuses ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကိုယ်ပိုင် CS: GO အသင်းထူထောင်မယ့် အမေရိကန်ရေတပ် (U.S. Navy) Read More »
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး PUBG Mobile (၁ဝ) သင်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များအတွင်းမှာ PUBG Mobile ဟာ သာမန်မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်သာ မဟုတ်ပဲ Esports အသွင်နဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတာကို အားလုံးလည်း တွေ့မြင်ခဲ့ကြရမှာပါ။ ၂၀၁၉ အတွင်းမှာ PMCO, PMSC, Peacekeeper Elite စတဲ့ PUBGM ပြိုင်ပွဲကြီးများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာသန်းချီ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခု ၂၀၂၀ အတွင်း ကျင်းပမယ့် ပြိုင်ပွဲများမှာလည်း ဆုကြေးငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅ သန်းကျော် ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မိုဘိုင်းလ် Esports လောကအတွက် အားတက်စရာသတင်းဖြစ်ခဲ့သလို ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုလည်း ပြင်းထန်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်တိုးတက်လာဦးမယ့် PUBGM လောကမှာ ထိပ်တန်းလက်စွမ်းကို ပြသထားနိုင်ခဲ့ပြီး …
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး PUBG Mobile (၁ဝ) သင်း Read More »
၂၀၁၉ ရဲ့ ကြည့်ရှုသူအများဆုံး Esports ပွဲကြီးများ
“၂၀၁၉ ရဲ့ ကြည့်ရှုသူအများဆုံး Esports ပွဲကြီးများ” တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုမိုထွန်းကားလာတဲ့ Esports လောကမှာ ဂိမ်းဝါသနာရှင်ပရိသတ်အရေအတွက်ဟာလည်း များသထက် များလာခဲ့ပါတယ်။ မျက်မှောက်ခေတ် gamer များဟာ ယခင်ကလို ဂိမ်းကစားဖို့သာ အာရုံစိုက်နေကြတော့တာ မဟုတ်ပဲ Esports ပွဲများကို ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ ပိုမိုအချိန်ပေးလာကြတာကိုလည်း တွေ့ကြရမှာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၁၉ အတွင်း ကျင်းပခဲ့တဲ့ Esports ပွဲကြီးများဟာ ကြည့်ရှုသူ အလွန်များပြားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအမျိုးအစားအလိုက် ကစားသူဦးရေ မတူညီကြလို့ ယင်းဂိမ်းများရဲ့ပွဲကြည့်ရှုသူပရိသတ်အရေအတွက်ဟာလည်း အနည်းအများ ကွာခြားသွားလေ့ရှိပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လူပေါင်းသန်းချီ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ Esports ပွဲများရဲ့ အနာဂတ်ကတော့ တောက်ပလျက် ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၉ ရဲ့ ကြည့်ရှုမှုအများဆုံး Esports ပွဲများကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၇။ …
၂၀၁၉ ရဲ့ ကြည့်ရှုသူအများဆုံး Esports ပွဲကြီးများ Read More »
Dota နဲ့ League ကို ထူးထူးခြားခြား သာဒက တစ်ခုဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြလိုက်တဲ့ Ceb
“Dota2ဟာ ၃ ဘီး စက်ဘီးနဲ့တူကြောင်း ပြောကြားလိုက်တဲ့ OG.Ceb” တရုတ်နွယ်ဖွား အမေရိကန်နိုင်ငံသား Doublelift ဟာ Team Liquid ရဲ့ League of Legends ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ မကြာသေးမီက Doublelift ဟာ Dota2ထက် League of Legends ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကစားနိုင်ဖို့ ပိုမိုခက်ခဲကြောင်း ပြောခဲ့တဲ့အတွက် Dota2အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ တုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းများကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ Doublelift ကို တုံ့ပြန်ပြောဆိုသူများထဲမှာ TI8 နဲ့ TI9 ကို ၂ နှစ်ဆက် အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ OG အသင်းရဲ့ကစားသမား Ceb လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ …
Dota နဲ့ League ကို ထူးထူးခြားခြား သာဒက တစ်ခုဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြလိုက်တဲ့ Ceb Read More »
Twitch ပေါ်ကနေ ban ခံလိုက်ရတဲ့ N0tail
“Twitch ပေါ်ကနေ ban ခံလိုက်ရတဲ့ N0tail” The International ကို ၂ နှစ်ဆက်အနိုင်ရရှိထားတဲ့ OG အသင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင် N0tail ဟာ stream အမြဲလွှင့်လေ့ရှိသူတစ်ဦးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က နာမည်ကျော် Dota2streamer များ ဖြစ်ကြတဲ့ SingSing နဲ့ Gorgc တို့နဲ့အတူ ဂိမ်းကစားရင်း Twitch ပေါ်မှာ stream လွှင့်နေခဲ့ပါတယ်။ ယင်း stream ကို လွှင့်တင်ပြီးနောက် မကြာမီမှာပဲ Twtich က N0tail ရဲ့ channel ကို ban သွားခဲ့ပါတယ်။ Ban ခံရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို တိတိကျကျ မသိကြရပေမယ့် N0tail ဟာ သူ့ရဲ့ …
Twitch ပေါ်ကနေ ban ခံလိုက်ရတဲ့ N0tail Read More »
မိုဘိုင်းလ် Esports ရဲ့ တစ်မူထူးခြားပြဿနာများ
“မိုဘိုင်းလ် Esports ရဲ့ တစ်မူထူးခြားပြဿနာများ” မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းများ ခေတ်စားလာမှုနဲ့အတူ Esports ဆန်ဆန် ပြိုင်ပွဲများဟာလည်း ၂၀၁၉ အတွင်းမှာ ယခင်နှစ်များထက် ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ Call of Duty: Mobile ဟာ ထွက်ရှိပြီး တစ်ပတ်အတွင်းမှာ download ပေါင်း သန်း ၁၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့ခြင်း၊ Garena Free Fire ရဲ့ World Series ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုပေါင်း ၂ သန်းကျော် ရှိခဲ့ခြင်း၊ MLBB m1 world championship 2019 ကျင်းပခဲ့ခြင်း စ တာတွေဟာ မိုဘိုင်းလ် Esports ရဲ့ ရေပန်းစားလာမှုကို ညွှန်ပြလျက် ရှိပါတယ်။ မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများ Esports လောကအတွင်း ဝင်ရောက်လာချိန်မှာ …
မိုဘိုင်းလ် Esports ရဲ့ တစ်မူထူးခြားပြဿနာများ Read More »
ရွေးကောက်ပွဲ ရန်ပုံငွေနဲ့ Steam က ဂိမ်းတွေ ဝယ်တဲ့ အမေရိကန်အမတ်
[Unicode] လူအများစုဟာ Steam ပေါ်က ဂိမ်းတွေကို ဈေးချိုချိုသာသာနဲ့ ရရှိနိုင်ဖို့ လျော့ဈေးပေးမယ့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းဝယ်ယူလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Duncan D. Hunter လို့ အမည်ရတဲ့ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ လျော့ဈေးမစောင့်ပဲ Steam ဂိမ်းတွေကို ဈေးကြီးကြီးနဲ့ အလောတကြီး ဝယ်ယူခဲ့ပုံပါပဲ။ Hunter ဟာ ရွေးကောက်ပွဲရန်ပုံငွေအများကြီးကို အလွဲသုံးစားလုပ်ထားလို့ အပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမယ့် အရေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တကယ်တမ်း ဒေါ်လာသိန်းပေါင်းများစွာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ထားတာဟာ ဂိမ်းဝယ်ဖို့ သက်သက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၀ ကနေ ၂၀၁၆ ထိ ကာလအတွင်းမှာ ရန်ပုံငွေတွေကို ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ၊ ဇိမ်ခံခရီးတွေ၊ စားစရာတွေ စသဖြင့် အများကြီး ဝယ်ယူ သုံးဖြုန်းခဲ့တာပါ။ Hunter ဟာ သူ့ရဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်သူ Margaret လည်း သုံးဖြုန်းနိုင်အောင် …
ရွေးကောက်ပွဲ ရန်ပုံငွေနဲ့ Steam က ဂိမ်းတွေ ဝယ်တဲ့ အမေရိကန်အမတ် Read More »
Apex Legends ရဲ႕ အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ Patch 3.2 Update.
Apex Legends Update Patch 3.2 Update [Unicode] နောက်ပိုင်းထွက်ရှိလာတဲ့ Battle Royale Video game တွေထဲမှာ Electronic Arts ရဲ့ Apex Legends ဟာလည်း လူကြိုက်များပြီး အောင်မြင်တဲ့ Battle Royale Game တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သက်တမ်းနုနယ်သေးတဲ့ Free-to-play PC game တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ Apex Legends ဟာ ကစားသမားအကြိုက် Update တွေ၊ Event တွေနဲ့ Battlepass တွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ Ongoing Apex Legends Ranked Season3ဟာ (၄) လ ခန့် ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး …
Apex Legends ရဲ႕ အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ Patch 3.2 Update. Read More »